I-China VersaMax Allen Bradley - Abahlinzeki - i-HuiTong Industry Company Limited google-site-verification=TXg1_WchYlMLB36tKPCkhY02HfKkkQfiMDCP-ksCfHM
Ikhaya > Imikhiqizo > Amapulatifomu Anobuhlakani be-GE > I-VersaMax
Imikhiqizo yeVersaMax iyisizukulwane sakamuva samasistimu wokulawula avela ku-GE, acwebile futhi anomnotho.
Ifilosofi yokwakheka kwayo iyimisebenzi enamandla nobunye bendawo yonke, inikela ukusebenza okuphezulu kakhulu kohlelo lokulawula.
I-VersaMax uhlelo olungasetshenziswa hhayi nje njengemodyuli ye-I / O kwamanye amadivaysi okulawula amakhulu, kodwa futhi njenge-PLC ehlukile, futhi njengohlelo lokulawula olusatshalaliswa!
Uhlelo lomkhiqizo we-VersaMax PLC lungaba lukhulu noma lube lincane, kulula ukulusebenzisa futhi kulula ukulusebenzisa. Ilungiselelwe futhi yakhiwe ngokuya ngomgomo we- "Six Sigma".
Isixazululo seVersaMax singumkhiqizo wokulawula owodwa ongasetshenziswa njenge-I / O, i-PLC noma ukulawulwa okwabiwe okufika kumaphoyinti angama-256 I / O.
I-VersaMax inikeza ukwethenjwa nokwandisa isikhathi sayo ngomklamo wayo oyisithupha-sigma, i-diagnostics enembile, nokufakwa kwe-module ye-I / O kwe-hot.
Iprosesa enamandla yeVersaMax ene-12K yememori ingasetshenziselwa izinhlelo zokusebenza, i-math-point math point, i-real-time iwashi, ama-subroutines, i-PID, inkumbulo ye-flash kanye nezindlela zokusebenza ezinamaphampu, ukuhlinzeka ngokuguquguquka okunamandla kwiphakheji elihlanganisiwe.
Kubandakanya ukuxilonga okuzenzakalelayo kwe-I / O yokubheka kabanzi ngamatafula wephutha langaphakathi nama-LED ukukhombisa amaphutha esistimu kanye ne-I / O Force-ekhulula amandla opharetha futhi igxile ekugcineni ikhwalithi ephezulu kakhulu
Sine stock amakhulu i-VersaMax IC 200 chungechunge futhiI-VersaMax CPUizingxenye. Ungathola izingxenye kusuka kuwebhusayithi nomasithumele i-imeyili yokuhlinzekwa.
Imininingwane YomkhiqizoInkumbulo yomsebenzisi ye-CPU 34K ehlelekile
Imininingwane YomkhiqizoInkumbulo yomsebenzisi ye-CPU 128K ehlelekile, i-0.8MSEC / K Boolean eyodwa i-RS232, amachweba we-RS485 eyodwa kanye ne-Ethernet port 10Mbit base uT.
Imininingwane YomkhiqizoAMANDLA WOKUPHAKATHI KWAMANDLA
Uhlobo LomkhiqizoIzimpahla Zamandla
Imininingwane YomkhiqizoAMANDLA WOKUPHAKATHI 24VDC INPUT
Imininingwane YomkhiqizoUKUPHAKAMA KWAMANDLA NGOKUFINYELELE 3.3VDC 24VDC INPUT
Imininingwane YomkhiqizoUKUPHAKAMA KWAMANDLA NGOKUFINYELELE 3.3VDC 120 / 240VAC INPUT
I-VersaMax I-Allen Bradley ethengisa, yokusungula enkulu esitokisini, inikezwa yiHiTong Industry Co; I-Ltd.Ungabe ufuna amanani aphansi amanani we-automation I-VersaMax brandation nge-quotation? Singakunikeza ama-PLCs, ama-Powerflex Drives, ama-VFD, abalawuli beServo, Panelviews.